Hei! Ndinoda kukwidziridzwa chete
Isu tinovimbisa - kwete spam! Izvo chete zvechokwadi uye zvakanaka zvinopihwa!
Isu tiri nyanzvi dzekutsvagisa uye vaparidzi veHuman Growth Hormone zvigadzirwa munyika dzinoverengeka kusanganisira Thailand. Yedu kambani ndiyo yekutanga kambani muThailand iyo inogona kuvimbisa yakanyanya kunaka mhando uye yakabudirira YEMAHARA kuendeswa kweHGH. Tinogona kupa Express kutumira mukati memazuva mashoma kune chero kupi muThailand uye nekukurumidza kudzidziswa kwenyika. Zvigadzirwa zvedu ndezvechokwadi, zvakachengeteka, uye zvinoshanda pamwe nekutenderwa neDFA (Kudya & Dhiraimendi Administration) munyika zhinji. E-Commerce Kunyoresa Nhamba: F0167552340007
Dhirivhari Sarudzo dzeHGH muPhuket, Thailand uye kutakura kwepasi rose
inotora maawa e2-3 muPhuket, Bangkok, Krabi naPattaya. Chokurapa mudziyo une ice ane masingano emahara uye thermo bhegi rakasununguka!